Wepamusoro mashanu Makanganiso Ekudzivirira Mukushambadzira Kushandisa Martech Zone
Chipiri, Zvita 13, 2016 Chitatu, December 14, 2016 Anthony Bergs
Kushambadzira otomatiki tekinoroji ine simba inoshamisa iyo yakachinja maitiro emabhizimusi ekushambadzira edhijitari. Inowedzera kugona kwekushambadzira nepo ichideredza iwo anoenderana pamusoro nekumisikidza kudzokorora kwekutengesa uye nzira dzekutengesa. Makambani eese saizi anogona kutora mukana wekushambadzira otomatiki uye kuwedzeredza yavo yekutungamira chizvarwa pamwe neyakagadzirwa mhando yekuedza.
Kupfuurisa 50% yemakambani atove kushandisa kushambadzira otomatiki, uye vangangoita 70% yevasara vari kuronga kuishandisa mumwedzi inotevera 6-12. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mashoma kwazvo emakambani anoshandisa kushambadzira otomatiki akasangana nezvakada mhedzisiro. Vazhinji vavo vanoita zvikanganiso zvakajairika zvinokanganisa mushandirapamwe wekushambadzira. Kana iwe uri kuronga kushandisa Kushambadzira Automation kune yako yakasimba, dzivisa izvi zvikanganiso kuti uwedzere mikana yako yekubudirira neazvino kushambadzira tekinoroji:
Kutenga Yakashata Yekushambadzira Automation Platform
Kusiyana nemamwe mapuratifomu ezvekushambadzira akadai sekushambadzira email kana zvemagariro maturusi, kushambadzira otomatiki kunoda kusangana kwepedyo nesoftware nemaakaundi enhau, mawebhusaiti, CRM iripo uye humwe hutekinoroji hwekutevera. Haasi ese mashini ekushandisa anoitwa akaenzana maererano nemaficha uye kuenderana. Mazhinji mafemu anotenga software chete zvichibva pane zvayogona kuita uye mabhenefiti. Kana iyo software nyowani isingaenderane nehurongwa hwako huripo, inopedzisira yagadzira kusagadzikana kunonetsa kugadzirisa.
Ita ongororo yakakura uye kuyedza demo usati wapedza otomatiki software kune yako yakasimba. Iyo isingaenderane software ichawana zvishoma, zvisinei kuti ndezvipi zvakanaka uye maficha ayo ainopa.
Hunhu hweDhata rako reDhenda
Iyo data iri padanho rekushambadzira otomatiki. Hwakashata hunhu hwe data hunogadzira yakaipa mhedzisiro zvisinei nezwi rekushambadzira zano uye nekumisikidza kwayo kuita. Anenge makumi maviri neshanu muzana emaemail email anopera gore rega. Izvi zvinoreva kuti, dhatabhesi ye10,000 email ids ichave iine chete 5625 id id chaiyo mukati mekapfupi kwenguva yemakore maviri. Iwo asingashandi emaimendi id anokonzeresawo mumabhuremu anokanganisa mukurumbira weemail server.
Iwe unofanirwa kuisa mashini munzvimbo yekuchenesa dhatabhesi nguva nenguva. Mukushayikwa kwemaitiro akadaro, haugone kutsigira kudzoka kwemari mukushambadzira otomatiki.
Hwakashata Hunhu hweZvinyorwa
Kushambadzira otomatiki hakushande uri wega. Iwe unofanirwa kuburitsa zvemhando yepamusoro zvemukati zvinowedzera vatengi kuita. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti pakushambadzira otomatiki kuti ubudirire, vatengi kuita kunofanirwa. Kana iwe ukaita yekushambadzira otomatiki pasina kuisa mari yakakosha mukugadzira mhando yezvinhu nguva dzose, zvinogona kutungamira kune yakazara njodzi.
Izvo zvakakosha kuti uzive kukosha kwezviri mukati uye uve neyakajeka nzira yekugadzirisa zvemukati zvemukati nguva dzose.
Sub-Yakanyanya Kushandisa KwePlatform Zvimiro
Pakati pemakambani akagamuchira kushambadzira otomatiki, chete gumi% ndivo vakashandisa ese maficha eiyo software. Iyo yekupedzisira chinangwa chekushandisa otomatiki kubvisa kupindira kwevanhu kubva mukudzokorora mabasa. Nekudaro, kana iyo software ikasashandiswa zvizere, iro remaoko basa rebazi rekushambadzira harizodzikise. Asi, iyo yekushambadzira maitiro uye kuzivisa kunozove kwakanyanya kubatikana uye kunokanganisa zvikanganiso zvinodzivirirwa.
Paunofunga kubatanidza otomatiki otomatiki, ita shuwa kuti timu inopinda nekudzidziswa kwakakura pakushandisa maficha software. Kana mutengesi asingapi kuraira kwekutanga, nhengo dzechikwata chako dzinofanira kushandisa nguva yakakosha pazvivakwa portal yesoftware uye vanzwisise nuances yechigadzirwa.
Kunyanyisa Kuvimbika pa Email
Kushambadzira otomatiki kwakatangisa neyekushandisa yeemail kushambadza. Nekudaro, mune yazvino fomu, software yacho yaisanganisira dzinenge dzese dhijitari chiteshi. Kunyangwe iwe uchitora kushambadzira otomatiki, kana iwe uchiri kuvimba zvakanyanya paemail kuti ugadzire zvinotungamira, inguva yekufungisisa iyo yese nzira yekutengesa. Shandisa zvimwe midhiya senge zvemagariro, injini dzekutsvaga uye mawebhusaiti kuti ape ruzivo rusina musono kune vatengi mukuzadzisa zvinangwa zvavo. Kunyanyisa kutsamira paemail kunogona zvakare kutsamwisa vatengi kusvika padanho rekuti ivo vanotanga kuvenga yako yakasimba.
Kuti uwane yakanyanya kudzoka mukudyara pane yekushambadzira otomatiki, iwe unofanirwa kusanganisa nzira dzese uye kushandisa simba rechiteshi chega kushandura tarisiro kuva vatengi.
Kushambadzira otomatiki kunoda kukosha kwekutanga kudyara zvine chekuita nenguva nemari. Haisi imwechete piritsi software yemashiripiti inogona kugadzirisa ako ekutengesa matambudziko. Nekudaro, usati waita yako pfungwa yekutenga yekushambadzira otomatiki chishandiso, ita shuwa kuti iwe unotora iyo nguva kunze kwechazvino chirongwa kuti uibatanidze zvizere muiyo system.
Uyezve, kurudzira nhengo dzechikwata chako kuti dzidze zvinhu zvitsva uye nekugadzirisa mhinduro zvichienderana nezvinodiwa. Mune zvimwe zviitiko, iwe ungatokumbira mutengesi kuti agadzirise imwe nzira zvinoenderana nezvaunoda chaizvo. Chinangwa chekupedzisira chinofanirwa kunge chiri chekubvisa kupindira kwevanhu kubva mukudzokorora mabasa ekushambadzira uye kugadzirisa hupenyu hwekutenga.
Tags: kushandisa michinadzivisamarketing automationkushambadzira otomatiki zvikanganisozvikanganiso
Anthony maneja weprojekiti pa Vanyori Paawa uko kwaanoshandisa akasiyana uye akasarudzika marongero ekushambadzira mushe mabhizinesi evatengi vake. Kushaya nguva kana kuda kunyora bepa rako? Ipa basa redu rekunyora rekuyedza uye rega huremu hudonhe kubva pamafudzi ako! Tichakuchengetera maawa ekuvhiringidzika uye kushushikana nekukuitira iwe chikamu cheshumba chebasa.
Dec 14, 2016 pa 9: 47 AM
Chinyorwa chinonakidza kwazvo. Ndiri kufara kuti iwe wakataura kuti kushambadzira otomatiki ndeye makambani eese saizi, nekuti ingano yakajairika kuti chete makuru chete ndiwo anogona kubatsirwa nemichina yekushandisa.
Zvita 15, 2016 na5: 33 PM
Maria, maita henyu nemhinduro.
Chaizvoizvo unobvumirana newe. Iyo ingano yakajairika iyo inofanirwa "busted" !!!
Dec 28, 2016 pa 5: 31 AM
Ndatenda nemazano. Ndiri kuronga pakuedza kushambadzira otomatiki mugore idzva uye pane zvakawanda zvekudzidza. Iwe unofungei nezve mapuratifomu, senge GetResponse? Dambudziko kumakambani madiki mazhinji ibhajeti rekushambadzira otomatiki software. Ipapo kunouya nguva inodikanwa yokurovedzwa.
Dec 31, 2016 pa 1: 17 AM
Mhoro Edna, iwe wakandikurudzira kuti ndigovane pfungwa dzangu pasarudzo yako yeMarket Automation chikuva. GetResponse ipuratifomu yakasimba - asi iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti unoongorora kuti uchaishandisa sei uye zviwanikwa zvaunazvo kare. Ini ndanyora nezve izvi zvinhu mukutenga Kushambadzira Kwekushambadzira chikuva pano.
Jan 24, 2017 pa 7: 21 AM
Huru posvo, Douglas! Unofanirwa kuverenga kune wese munhu ari kufunga nezve kutenga yekushambadzira otomatiki chikuva. Ndatenda nekugovana ruzivo rwako.
Jan 24, 2017 pa 7: 19 AM
Edna, ndatenda nemhinduro yako. Handisati ndamboshandisa GetResponse, saka chaizvo, ini handigone kuratidza chero chinhu. Iko kune dambudziko rebhajeti remakambani madiki, asi ini ndinogona kutaura zvechokwadi kuti mune dzakawanda zviitiko zvakakosha izvozvo. Mubvunzo wekudzidzira uripowo asi maturusi mazhinji kana softwares zvinopa miedzo yemahara kuti iwe uve nechokwadi chekuti sevhisi inokodzera bhizinesi rako rinoda.